1. Sida loo sameeyo rootiga faransiiska ee udgoon, dhadhan fiican leh, isku darka saxda ah. Aad u cabsi badan oo aadan joojin karin cunista
2. Rootiga faransiiska, ama si fudud loogu yaqaan rootiga ukunta lagu rusheeyey, ee qaabka reer galbeedka ee raaxada leh. Taas oo aad ku abuuri karto macmacaan macaan Kaas oo loogu adeegi karo xaflad Xaflad ama cunto fudud Oo ay ku jiraan quraac ahaan in lagu cuno caano, shaah ama kafee, sidoo kale waxaa laga dhigi karaa macmacaan soo dhaweyn galabtii sidoo kale. Kaas oo kuu sheegi kara in rootiga faransiisku uu fudud yahay in la sameeyo, haddii lagu qurxiyo miro daray ah, wuu ku dari doonaa Qiimaha nafaqada Gebi ahaanba Dheeraad ah, markii la cuno, wali waxay dareemeysaa cusbooneysiin iyo tamar. Rootiga rootiga ee faransiiska sidoo kale waa wax aad u fudud in la sameeyo. Xitaa haddii aadan ku fiicnayn karinta Dheeraad ma aha wax adag in la diyaariyo maaddooyinka Waxaa laga iibsan karaa suuqa Bakhaarka waaxda Ama dukaamada ku habboon sidoo kale Haddii aan diyaar nahay, aan u diyaarinno alaabta ceyriinka ah ee loo yaqaan 'French Toast Berry'. Nidaamka diyaarinta waxyaabaha ceeriin sida soo socota
3. 2 xaleef rooti qaro weyn
4. 2 ukun
5. 1 koob caano cusub
6. Qanjo yar oo cusbo ah oo dhadhan jaalle badan leh.
7. Midhaha berry sida buluugga, strawberries, ama nooc kasta oo miro ah.
8. 1 moos
9. Malab, sida ay tahay dhadhankaagu
10. Wax yar oo subag ah oo aan cusbo lahayn
11. Diyaarso maaddooyinka Ka dib ku shub caano cusub iyo ukumo baaquli. Ku dar xoogaa milix ah oo garaac si aad isugu darto, ama waxaad u isticmaali kartaa qasaare.
12. Ku rid rootiga ukunta la garaacay iyo caanaha labada dhinac, ka dib markaa kuleyli digsiga kuleylka yar kuna dar subag yar, ama qiyaastii 10 garaam. U rog rooti si aad rootiga uga dhigto labada dhinac dhinac dahab ah oo udgoon ah.Markay kibista diyaar tahay dhinac dhig oo mid kale samee.
13. Kadib ku dar subag yar digsiga. Ka dib mooska muraayadaha u jarjar oo subag ku kari Taas oo qaabkan ka dhigi doonta mooska xitaa mid aad u macaan
14. Intaas ka dib, labada xabbadood ee rootiga ah ku rid saxan. Lagu qurxiyey berry Si aad u qurux badnaato, ka dib mooska ku dheji saxanka kuna shub malab sida aad rabto. Taasi waa taas, rootiga faransiiska waa dhameystiran yahay.
15. Sidee tahay Sida loo sameeyo rootiga Faransiiska ee si fudud loo samayn karo, waxaan dhihi karaa inay aad u macaan tahay. Iyo waliba liis ay ku soo dhaweynayaan martida Raaxo leh alaabta ceeriin oo ay fududahay in la helo Ciidaan awgeed, aan ka dhigno rooti Faransiis qoys ama saaxiibbo inay wada cunaan. Oo waa menu aad u hal abuur leh oo ku habboon qof walba